Shirkad Laga Leeyahay Dalka Turkiga Oo Muqdisho Ka Dhisi Doonta Garoon Diyaaradeed Oo Cusub “DAAWO NAQSHADDA” – idalenews.com
Heshiiskan ayaa dhexmaray Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo shirkad dhanka hormarinta qaabilsan oo laga leeyahay dalka Turkiga waxaana heshiiskan uu la xiriiraa Dhisidda garoon diyaaradeed oo cusub islamarkaana caalami ah kaasi oo laga hirgelin doono magaalada Muqdisho.
Heshiiskan ayaa waxa uu si gaar ah u dhexmaray Wasaaradda Howlaha Guud iyo Dib U Dhiska Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo shirkad lagu magacaabo Almnahdh oo ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee xaga dhismaha caalamka ayadoo hirgelinta naqshadda loo diyaariyey dhisidda garoonkan cusub ee diyaaradeed uu ku kacayo qiimo lacageed oo gaaraya Toban Milyan oo Doollar ( $10 million).
Heshiiskan ayaa qeexaya in shirkadan ay dhisto garoon cusub oo diyaaradeed oo ka koobnaan doona dhammaanba qeybaha uu garoon diyaaradeed oo caalami ah tusaale ahaan dhabaha ay diyaaraduhu ku cararaan ee (Run way ), goobaha ay ku nasanayaan dadweynaha garoonka ka dhoofaya ama kuwa kasoo degaya,qeybta loogu talagalay soo dhaweynta mas’uuliyiinta (VIP),dhismaha guud ee garoonka muuqaalkiisa kore waxaana uu garoonku awood u yeelan doonaa inuu si la mid ah garoommada caalamka uu u shaqeeya 24ka saac si’aan kala joogsi ama hakad laheyn.
Dhismaha garoonkan cusub ayaa noqon doona mid aad u ballaaran ayadoo loo dhisi doono qaab casri ah waxaana maalintiiba lagu sameyn doonaa 60 duulimaad ayadoo sidoo kalena ay markiiba 5,000 oo qofood ay halkii marba garoonka wada isticmaali karaan.
Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud iyo Dib U Dhiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Muxidiin Maxamed Kaalmooy ayaa rajo ka muujiyey in heshiiskan uu u hirgalo sidii loogu talagalay waxaana uu ku ammaanay walaalaha Turkiga sida ay had iyo goor u garab taaganyihiin shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed.
Suleyman Kozova oo isagu ah madaxa shirkadan laga leeyahay dalka Turkiga ee hirgelin doonta dhismaha garoonkan diyaaradeed ee cusub islamarkaana heshiiska dhanka shirkadda u saxiixay ayaa sheegay in garoonkan diyaaradeed uu noqon doono mid ka mid ah garoommada diyaaradeed ee ugu wanaagsan ama ugu hormarsan caalamka waxaana goobta heshiiska lagu kala saxiixday sidoo kale goobjoog ka ahaa safiirka dowladda Turkiga u fadhiya magaalada Muqdisho.
Muuqaallo lasoo bandhigay oo ah naqshadda loogu talagalay garoonkan diyaaradaha ee cusub ayaa waxaa ka muuqanaya dhismaha garoon diyaaradeed oo caalami ah ayadoo magaca garoonka ee dhismaha ku dul qoranna uu yahay “MOGADISHU AIRPORT” ayadoo dhismaha garoonkan diyaaradeed ee cusubna uu noqon doona mid ka baxsan magaalada waxaana laga hirgelin doonaa inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Balcad.
Dhismaha garoonkan diyaaradeed waxaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa bisha March ee fooda inagusoo heysa ayadoo inta dhismaha uu socdana si caadi ah loo isticmaali doono garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho oo isagu hada duulimaadyada maalin kasta yimaada ay si aad usii kordhayaan.
Maxaa ka jira in Kenya ay la baxayso qayb ka mid ah Ciidamada ka joga Jubboyinka